ULA/AA ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် CHRO Field Director နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း – Chin World
August 16, 2019 Chin World Media Interview 0
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ – Salai Khup Khup
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့(CHRO) နှင့် ချင်းအမည်ခံ မီဒီယာများမှ ULA/AA အဖွဲ့အပေါ် စွပ်စွဲရေးသားမှုများကန့်ကွက်ကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကန့်ကွက်စာတွင် တာဝန်ခံမှုမရှိသည့် ရေးသားချက်၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ အဂတိတရားမကင်းရှင်းသော စွပ်စွဲချက်၊ အမုန်းတရားနှင့် မနာလိုမှုများကို ပေါင်းစပ်ကာ ရေးသားသည့်ရေးသားချက်၊ မြန်မာအစိုးရ၊ စစ်တပ်(ရန်သူ) နှင့်ပူးပေါင်း မိမိတို့အား နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ခိုက်သည့်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဟုမှတ်ယူကြောင်း ပါရှိသည်။ အဆိုပါ ULA/AA ၏ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (CHRO) ၏ Field Director Pu Terah ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ CHROနဲ့ ချင်းမီဒီယာဖွဲ့ အချို့က စွပ်စွဲရေးသားတယ်လို့ ပြောတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုပြောချင်လဲ?
ဖြေ။ ။ လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကို မတရားစွပ်စွဲပြီး ပြောဆိုရေးသားတာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အချက်အလက်တွေက ခံရသူဖြစ်ဖြစ် ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာဘော်တစ်ခုမှ မပါဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောစရာကိုမလိုတာပါ။
မေး။ ။ AA နဲ့ အစိုးရတပ်မတော်ကြား စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုအပေါ် CHROရဲ့ရပ်တည်ချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ကတော့ အမှန်တရားပေါ်မှာ ရပ်တည်မှာဘဲ ဘယ်သူ့ကိုအသာပေး၊ ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်မြင် ဆိုတာမရှိဘူး အမှန်တရားပေါ်မှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်တယ်။ ချင်းလူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာ လူ့အခွင့်ရေးကို စောင့်ကြည့်နေတာနဲ့အညီ အဓိကအမှန်တရားပေါ်မှာဘဲ ရပ်တည်ပါတယ် ဟိုပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ဒီပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူး။ အဓိကအမှန်တရားပေါ်မှာ ရပ်တည်မယ် အပြစ်မဲ့ပြည်သူနဲ့ အကာကွယ်မဲ့ပြည်သူတွေရှေ့မှာ ကျွန်တော်တို့မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်။
မေး ။ ။ ကြေညာချက်မှာ AAအနေနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးကို လေးစားတန်ဖိုးထားတယ်လို့ ပြောတာကိုလက်ခံ နိုင်ပါသလား?
ဖြေ။ ။ သူတို့အပြောသက်သက် ပြောတာဖြစ်တယ်။ လက်တွေ့ကျတော့ သူတို့အဲလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။
မေး ။ ။ ရခိုင်နဲ့ချင်းလူမျိုးများကို တန်းတူဆက်ဆံရေး မူဝါဒထားတယ်လို့ ပြောထားတဲ့အပေါ်အမြင်ကကော?
ဖြေ။ ။ သူတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ ချင်းလူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့။
မေး။ ။ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဖက်ကနေပြီးတော့ မျှမျှတတ စဉ်းစဉ်းစားစား ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရေးဖို့တိုက်တွန်းတာကို လက်ခံနိုင်သလား?
ဖြေ ။ ။ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာ အဲလိုမျှမျှတတ ထိန်းထ်ိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ရေးဖို့မလိုပါဘူး။ အရှိကို အရှိတိုင်း အဖြစ်ကို အဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော်တို့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဖြစ်ပျက်မှန်သမျှကို မှန်အောင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်။ ပေါ့အောင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အမှုကြီးအောင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အရှိကိုအရှိတိုင်းရေးမှာဖြစ်တယ်။
မေး ။ ။ စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဖက်မှာ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုက ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲ။ CHRO ကကော ဘယ်လိုဟာမျိုးအပေါ် အခြေခံပြီး ကြေညာချက်ထုတ်သလဲ။?
ဖြေ။ ။ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု အစအနပျောက်ဆုံးမှု တချို့ဆိုရင် အတင်းအဓ္ဓမ ပေါ်တာထမ်းခိုင်းတာတို့ မတရားဖမ်းဆီးတာတို့ အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတာတို့ ရိုက်နှိက်တာတို့ သတ်ဖြတ်တဲ့အထိ ကျူးလွန်တဲ့အမှုတွေအပေါ် အဓိကထားပြီး ရေးသားထုတ်ပြန်တာတို့လုပ်တယ်။
မေး။ ။ ဘာလို့AAဖက်က အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ သူတို့မှာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုကင်းမဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။
မေး ။ ။ စစ်ပွဲကြောင့် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ဘယ်လိုဆက်ပြီး အစီရင်ခံစာတွေ ဘယ်လိုဆက်ထုတ်မလဲ။?
ဖြေ။ ။ အရှိကို အရှိတိုင်းဘဲ ဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်၊ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဟာတွေကိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်။
သွဂုတျလ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့(CHRO) နှငျ့ ခငျြးအမညျခံ မီဒီယာမြားမှ ULA/AA အဖှဲ့အပျေါ စှပျစှဲရေးသားမှုမြားကနျ့ကှကျကွောငျးသဘောထားထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါကနျ့ကှကျစာတှငျ တာဝနျခံမှုမရှိသညျ့ ရေးသားခကျြ၊ နိုငျငံရေး၊ လူမြိုးရေး၊ အဂတိတရားမကငျးရှငျးသော စှပျစှဲခကျြ၊ အမုနျးတရားနှငျ့ မနာလိုမှုမြားကို ပေါငျးစပျကာ ရေးသားသညျ့ရေးသားခကျြ၊ မွနျမာအစိုးရ၊ စဈတပျ(ရနျသူ) နှငျ့ပူးပေါငျး မိမိတို့အား နိုငျငံရေးအရ တိုကျခိုကျသညျ့ထိုးနှကျခကျြတဈခုဟုမှတျယူကွောငျး ပါရှိသညျ။ အဆိုပါ ULA/AA ၏ကနျ့ကှကျကွောငျး ထုတျပွနျကွညောခကျြနှငျ့ပတျသကျပွီး ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့ (CHRO) ၏ Field Director Pu Terah ကိုတှဆေုံ့မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး။ ။ CHROနဲ့ ခငျြးမီဒီယာဖှဲ့ အခြို့က စှပျစှဲရေးသားတယျလို့ ပွောတဲ့အပျေါ ဘယျလိုပွောခငျြလဲ?
ဖွေ။ ။ လကျခံနိုငျစရာအကွောငျးမရှိဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့က သူတို့ကို မတရားစှပျစှဲပွီး ပွောဆိုရေးသားတာ တဈကွိမျတဈခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အခကျြအလကျတှကေ ခံရသူဖွဈဖွဈ ဒသေခံတှရေဲ့ ပွောဆိုခကျြအပျေါ အခွခေံပွီးတော့ ရေးသားဖျောပွခွငျးဖွဈတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အာဘျောတဈခုမှ မပါဘူးဆိုတာ ကြှနျတျောပွောစရာကိုမလိုတာပါ။
မေး။ ။ AA နဲ့ အစိုးရတပျမတျောကွား စဈပှဲဖွဈပှားနမှေုအပျေါ CHROရဲ့ရပျတညျခကျြက ဘာဖွဈမလဲ?
ဖွေ။ ။ ကြှနျတျောကတော့ အမှနျတရားပျေါမှာ ရပျတညျမှာဘဲ ဘယျသူ့ကိုအသာပေး၊ ဘယျသူ့ကိုအပွဈမွငျ ဆိုတာမရှိဘူး အမှနျတရားပျေါမှာဘဲ ကြှနျတျောတို့ရပျတညျတယျ။ ခငျြးလူ့အခှငျ့ရေးအဖှဲ့ဆိုတာ လူ့အခှငျ့ရေးကို စောငျ့ကွညျ့နတောနဲ့အညီ အဓိကအမှနျတရားပျေါမှာဘဲ ရပျတညျပါတယျ ဟိုပုဂ်ဂိုလျစှဲ ဒီပုဂ်ဂိုလျစှဲ ကြှနျတျောတို့မှာမရှိပါဘူး။ အဓိကအမှနျတရားပျေါမှာ ရပျတညျမယျ အပွဈမဲ့ပွညျသူနဲ့ အကာကှယျမဲ့ပွညျသူတှရှေမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့မားမားမတျမတျ ရပျတညျသှားမှာဖွဈတယျ။
မေး ။ ။ ကွညောခကျြမှာ AAအနနေဲ့ လူ့အခှငျ့ရေးကို လေးစားတနျဖိုးထားတယျလို့ ပွောတာကိုလကျခံ နိုငျပါသလား?
ဖွေ။ ။ သူတို့အပွောသကျသကျ ပွောတာဖွဈတယျ။ လကျတှကေ့တြော့ သူတို့အဲလိုမဟုတျဘူးဆိုတာ သခြောပါတယျ။
မေး ။ ။ ရခိုငျနဲ့ခငျြးလူမြိုးမြားကို တနျးတူဆကျဆံရေး မူဝါဒထားတယျလို့ ပွောထားတဲ့အပျေါအမွငျကကော?
ဖွေ။ ။ သူတို့ရခိုငျလူမြိုးတှကေို ဘယျလိုဆကျဆံတာလဲဆိုတာတော့ ကြှနျတျောတို့မသိဘူး။ ခငျြးလူမြိုးတှကေို ဘယျလိုဆကျဆံလဲဆိုတာတော့ ကြှနျတျောတို့သိတာပေါ့။
မေး။ ။ ရက်ခိုငျ့တပျမတျောဖကျကနပွေီးတော့ မြှမြှတတ စဉျးစဉျးစားစား ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး ရေးဖို့တိုကျတှနျးတာကို လကျခံနိုငျသလား?
ဖွေ ။ ။ လူ့အခှငျ့ရေးခြိုးဖောကျတယျဆိုတာ အဲလိုမြှမြှတတ ထိနျးထျိနျးသိမျးသိမျးနဲ့ ရေးဖို့မလိုပါဘူး။ အရှိကို အရှိတိုငျး အဖွဈကို အဖွဈတိုငျး ကြှနျတျောတို့တငျပွရမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ဖွဈပကျြမှနျသမြှကို မှနျအောငျဘဲ ကြှနျတျောတို့ရေးလို့ရတယျ။ ပေါ့အောငျဘဲဖွဈဖွဈ အမှုကွီးအောငျဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောတို့လုပျလို့မရပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့က အရှိကိုအရှိတိုငျးရေးမှာဖွဈတယျ။
မေး ။ ။ စဈပှဲဖွဈတဲ့ဖကျမှာ လူ့အခှငျ့ရေးခြိုးဖောကျမှုက ဘယျလိုဟာမြိုးတှလေဲ။ CHRO ကကော ဘယျလိုဟာမြိုးအပျေါ အခွခေံပွီး ကွညောခကျြထုတျသလဲ။?
ဖွေ။ ။ လူ့အခှငျ့ရေးခြိုးဖောကျမှာ ညှငျးပမျးနှိပျစကျမှု အစအနပြောကျဆုံးမှု တခြို့ဆိုရငျ အတငျးအဓ်ဓမ ပျေါတာထမျးခိုငျးတာတို့ မတရားဖမျးဆီးတာတို့ အကွောငျးမဲ့ဖမျးဆီးတာတို့ ရိုကျနှိကျတာတို့ သတျဖွတျတဲ့အထိ ကြူးလှနျတဲ့အမှုတှအေပျေါ အဓိကထားပွီး ရေးသားထုတျပွနျတာတို့လုပျတယျ။
မေး။ ။ ဘာလို့AAဖကျက အခုလိုကွညောခကျြထုတျတယျလို့ ထငျပါသလဲ?
ဖွေ။ ။ သူတို့မှာ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုကငျးမဲ့တယျလို့ ကြှနျတျောယူဆတယျ။
မေး ။ ။ စဈပှဲကွောငျ့ လူ့အခှငျ့ရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေို ဘယျလိုဆကျပွီး အစီရငျခံစာတှေ ဘယျလိုဆကျထုတျမလဲ။?
ဖွေ။ ။ အရှိကို အရှိတိုငျးဘဲ ဒသေခံတှရေဲ့ခံစားခကျြ၊ လကျရှိဖွဈပကျြနတေဲ့ ဟာတှကေိုဘဲ ကြှနျတျောတို့ ဖျောထုတျပွောဆိုမှာဖွဈတယျ။